बस खुले तर यात्रु आएनन्... :: नारायण खड्का :: Setopati
बस खुले तर यात्रु आएनन् (तस्बिरहरू) तुलसीपुर बसपार्कमा यात्रुभन्दा तरकारी बेच्नेको भीड
नारायण खड्का दाङ, असोज १
सरकारले झन्डै ६ महिनापछि आजबाट लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन अनुमति दिएको छ। आधा वर्षसम्म गाडीको स्टेरिङ समाउन नपाएका चालक र सहचालक बिहानैदेखि बसपार्कमा पुगेका छन्। चालक र सहचालक बस चलाउन तम्तयार भए पनि यात्रु भने आएका छैनन्। यो दृश्य दाङको तुलसीपुरस्थित बसपार्कको हो।
बसपार्कमा टिकट काट्नेको लाइनमा तरकारी बेच्ने मानिसहरूको लाइन छ। अघिपछि जस्तो बसपार्कमा खचाखच बस र यात्रु हुन्थे भने किन बसपार्क तरकारी बजारमा परिणत हुन्थ्यो र?
महिनौं लामो लकडाउनले गर्दा रित्तो बसपार्कलाई स्थानीय सर्वसाधारणले तरकारी बेच्ने थलोको रूपमा उपयोग गर्दै आएका रहेछन्। जहाँ केहीले तरकारीको बार्गेनिङ गरिरहेका थिए।
पछिल्लो समय सबभन्दा बढी प्याजको मूल्य अचाक्ली बढेको छ।
केहीदिन पहिलेसम्म एक सय रुपैयाँमा साढे दुई किलो प्याज किन्न पाइन्थ्यो आज ५ किलोको चार सय पुगिसकेको छ ।
झण्डै ६ महिनापछि पहिलो पटक लामो दूरीमा बस चल्न थालेपछि चहल पहल कस्तो छ भनेर केही सर्वसाधारण पनि बसपार्क पुगेका थिए। बिहीबार बिहान साढे ७ बजेतिर तुलसीपुर बसपार्क पुग्दा लामो दूरीका कुनै पनि यात्रु आएका थिएनन्। टिकट काउन्टर भने खुला थिए।
काउन्टर खोलेर विभिन्न यातायात प्रालिका कर्मचारी यात्रुको प्रतीक्षामा बसिरहेका देखिन्थे। बरू विश्वकर्मा बाबाको पूजा आराधना गर्न तयारी भइरहेको थियो।
त्यतिबेला त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती यातायात प्रालिका डायल इञ्चार्ज दिन शाहले काठमाडौंलगायत ठाउँमा जानका लागि एक जना यात्रु पनि नआएको जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, धनगढी, नेपालगञ्जलगायत ठाउँ जान एक जना यात्रु पनि आउनुभएको छैन,’ शाहले भने, ‘सल्यान जानलाई ६/७ जना यात्रु आउनुभएको छ। उहाँहरूका लागि एउटा बसको व्यवस्था गरेर पठाउने तयारी भइरहेको छ।’
देशका विभिन्न जिल्लाहरूका लागि यही तुलसीपुरबाट बस छुट्ने गर्छन्।
यात्रु किन आएनन्? प्रश्नमा शाहले फ्याट्टै जवाफ दिए, ‘सरकारी कर्मचारी, अलि हुने खाने तथा जरुरी काम परेकाहरू निजी सवारीमार्फत् गन्तव्यमा गइसकेका छन्। त्यसैले अब जबसम्म स्कुल कलेजहरू सञ्चालन हुँदैनन्, त्यतिञ्जल सार्वजनिक बसहरूमा लामो दूरीका यात्रु आउलान् जस्तो देखिँदैन।’
शाहले अरू पनि कारण बताए।
‘झन्डै ६ महिना पार्किङमा राखेका बसहरू तत्काल मर्मत गर्न पैसा छैन। अधिकांश गाडीधनीहरू गाडी मर्मत गर्न ऋण सापटी खोजिरहेका छन्। गाडी मर्मत नगरी चलाउन सम्भव पनि छैन’, उनले भने।
अझै पनि कोरोनाको कहर यथावत् नै छ। त्यसले गर्दा अत्यावश्यक काम नपरी मानिसहरू भीडभाडमा जान चाहँदैनन्। त्यसैले जबसम्म आम सर्वसाधारण नागरिक निर्धक्कसँग बाहिर निस्कने वातावारण बन्दैन, त्यतिबेलासम्म सार्वजनिक यातायातले लामो दूरीमा यात्रु पाउने अवस्था तत्कालै नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १, २०७७, १२:४३:००
अब लाइसेन्स, ब्लुबुक हराएमा ट्राफिक कार्यालय धाउनु नपर्ने, अनलाइनबाटै भर्न सकिन्छ फारम
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण: ११ करोड ३१ लाखको बिगोसहित चार कम्पनीविरूद्ध मुद्दा
मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिँदा चितवनमा एकको मृत्यु
अपाङ्ग बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक पक्राउ
नेकपा अध्यक्ष द्वयलाई बालिकाको पत्रः कसैले दुरूत्साहन गरेपछि मबाट गल्ती भयो
पानीमा भएको ब्याक्टेरियाले बोत्स्वानामा भकाभक मरे हात्ती